Igumbi leZephyr 12 imiz ukusuka eForesta Lumina - I-Airbnb
Igumbi leZephyr 12 imiz ukusuka eForesta Lumina
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-26 Jan.
Yonwabela ubukhulu bendlu yethu yaseLouisiana; zonke iintanda zayo zibonisa ubuhle bendalo. Igumbi leZephyr likumgangatho osezantsi. Inebhedi enkulu etofotofo negumbi lokuhlambela labucala. Kubantu abayi-2 kunye nesilwanyana sakho osithandayo (kukho ezinye iimali ezibhatalwayo).
Igumbi leZéphyr likumgangatho osezantsi. Inebhedi enkulu etofotofo negumbi lokuhlambela labucala elineshawa. Inendawo yokungena yabucala kwibhalkoni engaphandle, enesitshixo se-elektroniki. Ukubona iNtshona (ukutshona kwelanga). Lilo kuphela igumbi elivumelekileyo kwizilwanyana zasekhaya. Ukuba uza nesilwanyana sasekhaya, imali eyongezelelekileyo yi $ 35 ebhatalwa kube kanye. Nceda uchaze uhlobo lwesilwanyana sasekhaya kunye nokubhukisha kwakho kwaye siza kukuthumelela isicelo semali eyongezelelweyo. Nceda uqaphele ukuba sinokubhatalisa imali eyongezelelekileyo okanye singalwamkeli ubhukisho olunezilwanyana zasekhaya ezingaphezu kwesinye. Oku kuza kuhoywa ngembalelwano.
Indlu inento yonke ejikelezileyo kumgangatho ngamnye. Unokuphumla uze wonwabele ukubuka iindawo ngoxa wonwabele ikofu yakho yasekuseni. Ukuba uyayinqwenela, awuzukuba nazo naziphi na iindaba okanye idatha nge-Wi-Fi yethu eqinileyo. Ukugcinwa kwendalo kunye nokukhathalela kubalulekile kuthi; nceda uqaphele ukuba zonke isepha zethu kunye nesepha zilungele indalo. Abasebenzi bethu nabo baqeqeshelwe ukwandisa iindlela zokukhusela indalo.
Asinikezeli ngokutya, kodwa sinikezela ngezi zinto zilandelayo: izixhobo, izitya, umatshini wokwenza ikofu (oqukiweyo), imbiza yokupheka, ioveni ye-microwave, ioveni encinci ye-convection, ifriji. Izitya okwaziyo ukuzitya; sicela nje ukuba uhlambe izitya ozisebenzisayo.
Kukho iivenkile zokutyela ezintle eCompton ekufutshane. Ungoyiki ukubuza uYves ngeendaba zakutshanje. Uya kukucebisa ngeevenkile zokutyela ezininzi ezintle onokuzifumana kwidolophana ekufutshane yaseCompton. Usendlini okanye uyafumaneka efowunini.
Kwindalo, ukutya okulungileyo okanye ukuphumla, ufikile kwindawo efanelekileyo!
Sifumaneka imizuzu emi-3 ukusuka kwilali yaseCompton kunye nemizuzu eli-15 ukusuka eForesta Lumina kunye neCoaticook's Parc de la Gorge.
Kuninzi okufumanayo kwidolophu yaseCompton ngexesha lehlobo. Kukho imakethi yoluntu rhoqo ngooLwezine ukusuka ngentsimbi yesine ukuya kweyesixhenxe. Kananjalo iiresityu ezi-4, ivenkile yepastry enye, igrosari kunye nevenkile yekona. I-B&B yethu yimizuzu eli-15 yokuhamba ukusuka e-Coaticook's parc de la Gorge kunye nezinto zayo ezininzi ezinomtsalane njengeForesta Lumina yodumo. Kwakhona 15 imizuzu ukusuka Lennoxville, North Hatley okanye Ayer’s Cliff. Imizuzu engama-35 ukusuka e-Orford National Park kunye nesixeko saseMagogi. Ngapha koko, zonke iindawo ezinomtsalane kwiilokishi zaseMpuma zikukufikelela kwakho!